Izihlungi zombala ezintsha ezimbili ongazisebenzisa ku-Instagram | Izindaba zamagajethi
Izihlungi zombala ezimbili ezintsha ongazisebenzisa ku-Instagram
I-Instagram ithathwa njengesinye sezicelo ezisetshenziswa kakhulu ngabantu abasha (ikakhulukazi) asebethande ikhwalithi yesithombe futhi umbala wesici abangakhonjiswa ngawo ngasinye sezithombe zakhe.
Kungacishe kubonakale kungumthetho ophelele i-Instagram eyamukelayo ngezibuyekezo zayo zonke, ngoba uma ezinye zazo zenzeka, sihlala sithola ukuthi kukhona isihlungi sombala esisha sihlanganisiwe. Ekuvuseleleni kwakamuva kakhulu kwamadivayisi eselula ane-iOS ne-Android, kufakwe izihlungi ezimbili ezintsha, okusolwa ukuthi zinethuba lokuthuthukisa izici ezimbalwa zezithombe ezithathiwe.
1 Yiziphi izihlungi ezintsha ezifakiwe ku-Instagram?
2 Zitholakala kuphi lezi zihlungi ze-Instagram ezintsha?
Yiziphi izihlungi ezintsha ezifakiwe ku-Instagram?
Okokuqala, kufanele sisho ngendlela yezeluleko ukuthi uma une-Instagram kunoma yimaphi amadivayisi eselula esiwakhulume ngenhla, kufanele uzame ibuyekezele enguqulweni yakamuva ngaphandle kwalokho, ngeke ube nethuba lokubabaza isihlungi se- «Ukuncishiswa»Futhi«Color«, Lawa amabili angamalungu amasha ohlu olubanzi lwezinketho ezikhona ngaphakathi kwesibonisi.
Kunezindlela ezahlukahlukene zokusebenzisa lezi zihlungi ezimbili ezithombeni ezithathiwe, ezizoncika kakhulu ekhonweni nasekwakhiweni komsebenzisi ngamunye. Manje, endleleni okufanele usebenze ngayo nalezi zihlungi, kungahle kube okuthile kuyadida kulabo abangashayeli kahle kahle kulolu hlelo lokusebenza lwe-Instagram, lokhu kuyisizathu sendatshana yethu yamanje, okusho ukuthi, sizozama ukusho "igxathu negxathu" indlela yokuya endaweni lapho lezi zihlungi zitholakala khona futhi, ukuzisebenzisela noma ngubani izithombe esizithathayo.
Zitholakala kuphi lezi zihlungi ze-Instagram ezintsha?
Labo abangabasebenzisi abanolwazi bangakwazi ukuthatha izeluleko ezilandelayo njengezinto eziyisisekelo futhi ezingenamsebenzi, noma kunjalo kufanele sicabange ukuthi inani elikhulu labantu liyaludinga lolu hlobo imininingwane yokwazi ukuthi ungasebenza kanjani nomsebenzi ngamunye ku-Instagram. Ngokuphathelene nezihlungi ezimbili ezintsha esesishilo, ungazithola ngemuva kokuthatha isithombe. Lokhu kusho ukuthi kulezo zithombe osuvele uzithathile ngaphambilini, imisebenzi kungenzeka ingaveli.
Ngakho-ke, sincoma ukuthi uchofoze kusithonjana esimise ikhamera (leso esisenkabeni yebha engezansi); ngawo lowo mzuzu, kuzosebenza ikhamera yeselula, kufanele ithathe noma yini oyifunayo. Vele, ungathola nokufaka isithombe seGalari noma i- "Camera of the roll." Uma usuvele unazo ezinye zazo, izinketho ezimbalwa zezihlungi zombala nezithombe ongazisebenzisa zizovela ezansi. Imisebenzi emisha ngeke itholakale noma kunalokho, lapho sithola u-tChofoza kusithonjana esime njenge- “spanner” phezulu.
Uma usukhethe lesi sithonjana uzobona ukuthi ezinye izinhlobo zezithonjana zivela ezansi, empeleni ezokwenza imisebenzi ezosetshenziswa nezithombe zethu. Phakathi kwabo, kufanele funa lezo ezithi "Fiphaza" futhi "Umbala"; eyokuqala ikhiqiza ukufiphala okuncane kwesithombe, ongashintsha kalula ngenketho yesilayida esizokhonjiswa ngaleso sikhathi. Komunye umsebenzi (umbala), lapho ukhetha, imibala embalwa izovela engxenyeni engezansi, khetha noma iyiphi yazo ngokuthepha kabili ukuze inkinobho yesilayida ivele. Kunoma ikuphi, le "nkinobho yesilayida" kufanele isetshenziselwe ukuba namandla amakhulu noma amancane womphumela owufunayo. Lapho uqeda ukucubungula, ungagcina lesi sithombe bese kamuva usabelana nabangani bakho ku-Instagram.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izihlungi zombala ezimbili ezintsha ongazisebenzisa ku-Instagram
Ukudluliswa kwe-iOS: Dlulisa idatha phakathi kwamadivayisi we-iOS neWindows noma we-Mac
Izithonjana ezingekho kuthebhu entsha ye-Google Chrome